1 Samueri 22:1-23
22 Naizvozvo Dhavhidhi akabva ipapo,+ akatizira+ kubako+ reAdhuramu;+ uye vakoma vake neimba yose yababa vake vakazvinzwa, vakaenda ikoko kwaaiva.
2 Varume vose vaitambudzika+ nevarume vose vakanga vaine akavakweretesa+ nevarume vose vaiva nemweya yaishungurudzika+ vakatanga kumuunganira,+ akava mukuru wavo;+ uye kwakava nevarume vanenge mazana mana vaaiva navo.
3 Gare gare Dhavhidhi akabva ikoko, akaenda kuMizpe riri muMoabhi, akati kuna mambo weMoabhi:+ “Ndapota, baba vangu naamai vangu+ ngavagare nemi kusvikira ndava kuziva zvandichaitirwa naMwari.”
4 Naizvozvo akavagarisa pamberi pamambo weMoabhi, vakaramba vachigara naye mazuva ose ayo Dhavhidhi akanga ari munzvimbo isingasvikiki.+
5 Kwapera nguva yakati, muprofita Gadhi+ akati kuna Dhavhidhi: “Usaramba uchigara munzvimbo isingasvikiki. Enda, usvike munyika yaJudha.”+ Nokudaro Dhavhidhi akaenda, akasvika musango reHereti.
6 Sauro akanzwa kuti Dhavhidhi nevarume vaaiva navo vakanga vawanikwa, Sauro paakanga akagara muGibhiya pasi pomuti womutamarisiki+ panzvimbo yakakwirira aine pfumo+ rake muruoko rwake uye vashandi vake vose vakamupoteredza.
7 Sauro akabva ati kuvashandi vake vakanga vamire vakamupoteredza: “Ndapota, teererai imi vaBhenjamini. Mwanakomana waJese+ achakupaiwo mose minda neminda yemizambiringa here?+ Achakugadzai mose kuti muve vakuru vezviuru+ nevakuru vemazana here?
8 Nokuti mose zvenyu mandimukira; uye hapana ari kundizivisa+ mwanakomana wangu chaiye paanoita sungano+ nomwanakomana waJese, uye hapana mumwe wenyu ari kundinzwira tsitsi uye kundizivisa kuti mwanakomana wangu chaiye amutsa mushandi wangu kuti andirwise sezvinoita munhu akavandira sezvazvakaita nhasi.”
9 Dhoegi+ muEdhomu, zvaakanga akamira pavashandi vaSauro, akabva apindura akati: “Ndakaona mwanakomana waJese achisvika kuNobhu kuna Ahimereki+ mwanakomana waAhitubhu.+
10 Akamubvunzira+ kuna Jehovha; akamupa mbuva,+ uye akamupa bakatwa+ raGoriyati muFiristiya.”
11 Mambo akabva atumira shoko kunoshevedza Ahimereki mwanakomana waAhitubhu mupristi neimba yose yababa vake, vapristi vaiva muNobhu.+ Naizvozvo vose vakauya kuna mambo.
12 Zvino Sauro akati: “Ndapota, teerera iwe mwanakomana waAhitubhu!” iye achibva ati: “Ndiri pano, ishe wangu.”
13 Sauro akati kwaari: “Nei iwe nomwanakomana waJese mandimukira,+ nokumupa kwawakaita chingwa nebakatwa, uye kumubvunzira kuna Mwari, kuti andirwise sezvinoita munhu akavandira sezvazvakaita nhasi?”+
14 Ahimereki akabva apindura mambo akati: “Pakati pevashandi venyu vose ndiani akaita saDhavhidhi,+ akatendeka,+ mukuwasha wamambo+ nomukuru wevarindi venyu uye anokudzwa mumba menyu?+
15 Ndatanga nhasi kumubvunzira+ kuna Mwari here? Handingambofungi zvakadaro! Mambo ngaarege kuitira mushandi wake chinhu chero chipi zvacho uye imba yose yababa vangu, nokuti pane zvose izvi mushandi wenyu haana kuziva chinhu chiduku kana kuti chikuru.”+
16 Asi mambo akati: “Ahimereki, chokwadi uchafa,+ iwe neimba yose yababa vako.”+
17 Naizvozvo mambo akati kuvamhanyi+ vakanga vakamira vakamupoteredza: “Tendeukai muuraye vapristi vaJehovha, nokuti vari kutsigirawo Dhavhidhi uye nokuti vaiziva kuti iye akanga achitiza asi havana kundizivisa!”+ Asi vashandi vamambo havana kuda kutambanudza ruoko rwavo kuti varwise vapristi vaJehovha.+
18 Mambo akazoti kuna Dhoegi:+ “Tendeuka uuraye vapristi!” Dhoegi muEdhomu+ akabva atendeuka, akarwisa vapristi, akauraya+ varume makumi masere nevashanu vakanga vaine efodhi+ yerineni zuva iroro.
19 Akaparadzawo Nobhu+ guta revapristi nomuromo webakatwa, murume pamwe chete nomukadzi, mwana pamwe chete neanoyamwa uye nzombe nembongoro nemakwai, zvakaparadzwawo nomuromo webakatwa.
20 Zvisinei, mumwe mwanakomana waAhimereki mwanakomana waAhitubhu, ainzi Abhiyatari,+ akapukunyuka, akatiza kuti atevere Dhavhidhi.
21 Abhiyatari akabva audza Dhavhidhi kuti: “Sauro auraya vapristi vaJehovha.”
22 Dhavhidhi akati kuna Abhiyatari: “Ndakanyatsozviziva zuva riya,+ kuti Dhoegi muEdhomu zvaaivapo, aizoudza Sauro.+ Ini pachangu ndakakanganisira mweya yose yeimba yababa vako.
23 Chingogara hako neni. Usatya, nokuti munhu wose anotsvaka mweya wangu anotsvaka mweya wako, nokuti uri munhu wandinofanira kudzivirira.”+